Michael Jackson, ny fisehoan'ny King of Pop Las Vegas fitsingerenan'ny andro nahaterahana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Michael Jackson, ny fisehoan'ny King of Pop Las Vegas fitsingerenan'ny andro nahaterahana
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao momba ny lamaody • LGBTQ • Vaovao • People • Tourism • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Fifaninanana Dance Michael Jackson 2021
Michael Jackson, ny Mpanjakan'ny Pop dia tokony ho 63 taona tamin'ny Alahady. Fotoana tsara nanararaotana hisehoana indray any Las Vegas ao amin'ny Cirque du Soleil.
Nantsoina hoe "King of Pop", izy dia raisina ho iray amin'ireo endrika ara-kolontsaina manan-danja indrindra tamin'ny taonjato faha-20. Nandritra ny efa-polo taona niasa, ny fandraisany anjara tamin'ny mozika, dihy ary lamaody, miaraka amin'ny fiainany manokana ampahibemaso, dia nahatonga azy ho olona manerantany amin'ny kolotsaina malaza.
Nahatsapa fa nanatrika ny antokony manokana i Michael Jackson rehefa Cirque de Soleil fiaraha-miasa amin'ny The Estate of Michael Jackson nankalaza ny tsingerintaona "King of Pops". Michael Jackson dia tokony ho 63 taona.
Nanomboka ny asabotsy 28 aogositra ny fankalazana ny faran'ny herinandro fitsingerenan'ny andro nahaterahana, miaraka amin'ny fanamby amin'ny dihy #MyMJMoses, notsarain'ny mpanoratra sy talen'ny Michael Jackson ONE, Jamie King, ary ireo choreographer mampiseho, Rich sy Tone Talauega.
Ny alahady 29 aogositra, 2021 ny mpanatrika dia afaka nihaona tamin'ny mpamorona akanjo lava an'i Michael Jackson ary mpanoratra ny “The King of Style: Dressing Michael Jackson,” Michael Bush tamin'ny fanaovan-tsonia boky akaiky.
Ny fankalazana ny andro dia nanasongadina Q&A manokana miaraka amin'ny talen'ny talen'ny ekipa sy mpahay dihy malaza, Kenny Ortega, ho fankalazana ny faha-25 taonan'ny "HIStory World Tour", izay natomboka tamin'ny 7 septambra 1996.
Ortega dia niaraka tamin'ny ekipa mpikambana ao amin'ny ekipa mpamorona Michael Jackson ONE, Travis Payne, Jamie King, Rich ary Tone, izay niara-niasa tamin'i Kenny Ortega sy Michael Jackson. Nahazo tampoka fisehoan-javatra no mpitendry amponga Michael nandritra ny 30 taona, Jonathan “Sugarfoot” Moffett, izay niditra ho mpikambana tao amin'ny vondrona nizara fotoana tsy hay hadinoina sy nahavelom-po tamin'ny fiaraha-miasa tamin'i Michael.
Nanatrika sy nankafy ny hetsika tolakandro ny zanakalahin'i Michael Prince niaraka tamin'ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy sy mpianakaviny. Ny zava-nitranga tamin'io andro io dia nifarana tamin'ny olona rehetra, anisan'izany ny zanakalahin'i Michael, Bigi, nanatevin-daharana ny rahalahiny sy ny mpianakaviny hafa ary ny mpihaino amidy ho an'ny fampisehoana angovo avo lenta an'i Michael Jackson ONE. Ireo manana tapakila amin'ny fampisehoana dia nanana fotoana nihaonana tamin'ny solontena avy amin'ny The Estate of Michael Jackson, anisan'izany ireo mpandray anjara tamin'ny hetsika tolakandro.